Nepal Dayari | झुक्याएर कतारमा पेट बोकाएकी ललिताले छोरो जन्माइन/मेराे साहारा जन्मियो भन्दै धरधरी रोइन बिचरा! ललिता(भिडियो)
झुक्याएर कतारमा पेट बोकाएकी ललिताले छोरो जन्माइन/मेराे साहारा जन्मियो भन्दै धरधरी रोइन बिचरा! ललिता(भिडियो)
कार्तिक २३, २०७८ मंगलबार ४८० पटक हेरिएको
कतारमा झुक्याएर पेट बोकाउने कपुर बमले गर्भवती श्रीमतीलाई कु’ट’पि’ट ग’रे’र रातारात मुगु फरार भएको खबर केही समय अगाडी खुब चर्चाको विषय बनेको थियो ।
केहि समय अगाडी बिदेशबाट आउँदा ७ महिनाको गर्भ लिएर आएकी झापाकी चेलि केही समय अघि आफूलाई अलपत्र बनाएर मुगुका एक कपूर बम नाम गरेका युवा फरार भएकाे बताउँदै मिडियामा आएकी थिइन ।
कतारमा हुँदा परेको मायाप्रेमले आफूलाई घरको न घाटको बनाएको बताउँदै रुँदै मिडियामा आफ्ना दुःख पोखेकी थिइन । कपूर बमको घरमा एक श्रीमती रहेकाे कुरा आफु गर्भवती भएपछी मात्र थाहा पाएको बताएकी थिइन । धेरै दिनको खोजीपछि कपुर बम मुगुबाट झापा आइपुगेका थिए ।
पछि ग’ल्ती भयो भन्दै धरधरी कपुर बम रुँ’दा दाजु पनि रोएका थिए । अन्तत: परिवारले रुँदै कपुरको जिम्मा लगाएका थिए । जेठी श्रीमतीलाई पनि झापामा नै लिएर आएका कपुर बम करिब ४ महिना बसेपछि अहिले ललितालाई कु’ट’पिट ग’रे’र रातारात मुगु भागेको भन्दै ललिताले रुँदै आफ्नो दुःख व्यक्त गरेकी थिइन् ।
अहिले उनै ललिताले छोरालाई जन्म दिएकी छिन् ,हेर्नुहोस् यो भिडियो ।